जनतालाई निराश नबनाऊ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ फाल्गुन ५, सोमबार १३:०९ गते
सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त संसद् र पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको कामकारबाहीको मूल्याङ्कन जनस्तरबाट हुन नपाउँदै सरकार आफैँले आफ्नो प्रगतिको रटान लगाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठकमा प्रगतिको पहाड नै खडा गरेर वर्णन गरे । यस्तै, सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि ओलीकै शैलीमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे । सरकारले गरेको कामकारबाहीका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले सरकारले कामको गति बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएका छन् । निर्वाचनपश्चात् स्थिर सरकार बनेकाले निश्चय पनि सरकारको प्रभाव र प्राथमिकता विकास निर्माणमा पर्नु अन्यथा होइन । यसै पनि नौ/नौ महिनामा फेरिइरहने म्यादी सरकार पनि होइन यो । कर्मचारी संयन्त्रले यो तथ्य बुझेका छन् । यो वा त्यो बहानामा काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य नै नभए पनि विकास निर्माणमा त्यसको प्रभाव पर्नु अन्यथा होइन । सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा परिभाषित गरेको थियो भने दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ भनेर प्रचार गरेको थियो । तर, ओली सरकारको तेस्रो वर्ष सुरू हुँदा विकासको आरम्भ भने देखिएको छैन ।
सरकारले जेजति आश्वासन बाँडे पनि उपलब्धि भने देखिएको छैन । सर्वसाधारणले सुशासन, सेवा र परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रशासन जनमुखी छैन । जनप्रतिनिधि भाषणमुखी भएका छन् । सरकारले विगत दुई वर्षमा केकति राम्रो काम ग¥यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने आधार भनेको उसको लोकप्रियता हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीमा हिजोको ओज र प्रभाव आज घटेको छ । सरकारको लोकप्रियता घटेको छ । आफ्नै पार्टीपंक्तिबाट हुने समीक्षामा समेत उनी रक्षात्मक देखिएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने अर्को मापदण्ड भनेको विनियोजित रकम केकसरी खर्च भयो भन्ने हो । सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । जब विनियोजित विकास बजेट नै खर्च हुँदैन भने प्रगति कसरी हासिल हुन्छ ? सरकारलाई यसैले पटाक्षेप गरेको छ । सरकारले केकति राम्रो काम गरेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अर्को आधार भनेको उसको चुनावी घोषणापत्र हो । चुनावका बेला बाँडिएको घोषणापत्रअनुरुप केकस्ता काम भए ? त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । घोषणापत्र चुनावी रणनीतिमात्र हो भन्ने तथ्य सरकारकै कामकारबाहीले पुष्टि गरिसकेको छ । घोषणापत्र र सरकारको कामकारबाहीमा एकरुपता नहुनुले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ ।
सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा जाग्न सरकारी सेवामा सुधार हुनुपर्छ । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिन नसकेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र आफन्त र कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रजस्तो बनेको छ । योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास नहुँदा सरकारी संयन्त्रको ओज र वजनमा खिया लाग्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको सूचक घट्दो क्रममा छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको अवस्था देखाउँदै बजेटको आकार नै सानो बनाएका छन् । अझै पनि असारे विकासमा अपारदर्शी खर्च गर्ने पुरानै रोगको पुनरावृत्ति भएको छ । खर्चको गुणस्तर प्रभावकारी हुन नसकेका कारण पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारमा त्यसको प्रभाव पर्न सकेको छैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सुशासन, विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार हुनैपर्छ । तर, भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । गाउँगाउँमा डोजर चलाएर विकासभन्दा विनास नै बढी भएको छ । नागरिक सुरक्षाको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । चर्को मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण आहत भएका छन् । कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको छ । सरकारले ल्याएका र ल्याउन लागेका विधेयकप्रति पनि जनताको असन्तुष्टि छ । संक्षेपमा सरकारको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन ।